Madaxweynaha oo ka hadlay qorshaha Kenya ku dooneyso inay ku xirto xeryaha qaxootiga – STAR FM SOMALIA
Madaxweynaha ayaa sheegay in aysan sax aheyn go’aanka ay Kenya ku xireyso xeryaha qaxootiga, isla markaana ay ka dhalan karto dhibaato soo gaarta dadka qaxootiga.
“Taas sax ma ahan, dowladda Kenya si cad ugu sheegnay in dadka si qasab lagu soo celiyo inay dhibaato badan ka dhalaneyso, duruufaha Kenya ku kalifayo ee dadka hala celiyo inay tiraahdo xal ma ahan”ayuu yiri Madaxweyne Xasan Sheekh.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa sheegay in uusan rajeyneyn in qaabka dowladda Kenya wax u wado inay u dhici doonaan.
Sidoo kale Madaxweynaha ayaa xusay in dowladda Kenya looga baahan yahay inay tixgeliso heshiisyada caalamiga ee Qaxootiga, iyo heshiiskii saddex geesoodka ee dowladda Soomaaliya, Kenya iyo Hey’adda UNHCR.
Mar uu ka hadlay Madaxweynaha darbiga Kenya ka dhiseyso xuduuda ay la wadaagto Soomaaliya ayuu tilmaamay in aysan u wanaagsaneyn xiriir ahaan, siyaasad ahaan iyo dhaqaalaha labada dal.
“Anaga Kenya illaa iyo hada si rasmo ah nooma soo gaarsiin darbiga ay ka dhiseyso xuduuda dhinaca Kenya, laakiin kuma wanaagsana xiriirka labada dal iyo dhaqaalaha, ma garanayo sabab loo kala gooyo”ayuu yiri Madaxweynaha.
Dowladda Kenya ayaa sheegtay inay dhamaadka sanadkan ay xiri doonto xerada Qaxootiga Dhadhaab, halkaasoo ay ku tilmaamtay in looga soo abaabulo weerarada iyo amni darada ka dhaca gudaha dalkeeda.